Ukwanda yokuthengisa ingcebo ejensi
Noma yimuphi umqondisi ingcebo ejensi ukuzixazulula ngokuphelele le nkinga ebhekene nazo - njengoba izinga ukulawula ejensi ingcebo futhi kanjani ukwandisa yokuthengisa? Lokhu kuyaqondakala, ngoba kule megacities ejensi bhalisiwe bungabalwa kunamasonto angaba amakhulu amathathu, ingasaphathwa realtors olulodwa, ngakho "izinkathazo" ngoba umphathi ibhizinisi efuna ukuletha inkampani yakhe ezingeni elilandelayo bese athole okukhulu share emakethe. Futhi uma kukhona ekhona izindlela, amathuluzi noma ubuchwepheshe abaphathi ingcebo ejensi ukuthola ukwanda yokuthengisa, ukubonisa nenkampani yabo ukuthi ezingeni eliphakeme futhi agqashule ekusebenzelaneni ziqhathaniswa nezimbangi zazo ukuze? Yebo, la mathuluzi khona.
Yimaphi amathuluzi kuzokhulisa yokuthengisa yakho?
Ithuluzi lokuqala - IZIBALO OF IBHIZINISI LAKHO
Ukuqala ukwandisa yokuthengisa, into yokuqala okufanele niyenze ukuze uthole ukwaziswa okuningiliziwe kanye izibalo ukuhlelelwa kwebhizinisi abanekhono.
Ngokwesibonelo, bangaki amakhasimende eza kusayithi lakho, lokho iphesenti lezi amaklayenti shiya isicelo ukukhethwa ezindlini noma kwenza ucingo, mangaki amakhasimende empeleni oza ehhovisi futhi ngenxa yalokho baba amaklayenti abaye usayine inkontileka futhi ukhokhelwe ekupheleni imali.
Okunye amaklayenti ngubani, nganoma isiphi isizathu bafika isayithi futhi ngasizathu simbe akazange abe amaklayenti ingcebo ejensi - umsebenzi ezokwenza kudingeka zixazululwe.
Ukwazi lezi izibalo ukuthola ulwazi ngesikhathi esifanele, abanokwethenjelwa futhi umphathi abanekhono ungabona lapho kukhona izindawo ukukhula, ngenxa iNkampani yenza inzuzo futhi kukhule kuso.
Indlela ukwandisa yokuthengisa ngokwazi inani amakhasimende kanye ukuthengiselana?
Uma kungena ikhasimende ukuba kancane, kodwa, nokho, zingabantu okwanele ukuqinisekisa ukuthi inkampani khona, khona-ke, ukube bekunjalo, ungavele nomunye inkomba, ukwandisa ukugeleza engenayo amakhasimende, bese ngesikhathi esifanayo ukuguqulwa inzuzo kuzokwanda izikhathi eziningana.
Uma isibalo amaklayenti mkhulu, kodwa akukho yalokho, uma okukhipha yokuthengisa ongaphakeme, ongaphakeme ekupheleni amakhasimende, kubalulekile ukuba ngcono ikhwalithi yomsebenzi namaklayenti ukuqonda ukuthi yini abanalo. Kulokhu, ongalishumeka izikripthi ezithile ukuqeqesha abasebenzi abasebenza nge ukugeleza engenayo amakhasimende - abaphathi ehhovisi, onobhala, - ukuqinisekisa ukuthi isebenze kahle namaklayenti, futhi wamgcina ku neketanga kwaholela ekubeni sokusongwa.
Kubalulekile ukuqhuba analytics kuwo wonke qophelo yokuthengisa, ngoba ngaphandle intelligence asikwazi baqonde ukuthi imizamo sezishiye neminye imiphumela. Phela, ungakwazi ukunikeza ukukhangisa kakhulu, ungafundisa umphathi ukusebenza kahle, ungakwazi uthuthukise ukusebenza, kodwa uma asazi, bangakunaki ezinye zalezi zici ukufeza ushintsho, imizamo polucheniyae lolu lwazi kungenzeka ube yize. Ngesikhathi esifanayo, uma sinokuthambekela umhlaziyi, singathanda ke ukuthi yini isinyathelo kuyosilethela umphumela esiphezulu.
Eyesibili ithuluzi - inkomba kanye nomsebenzi nge base iklayenti
Umbuzo kuwe, abafundi abathandekayo: Ingabe uqhuba ikhasimende lakho base esinge elektroniki namkha ngomhlobo e CRM? Noma ngabe usebenza ku-ne amakhasimende abaye wathenga esivela kuwe umusa? Ngokwezibalo, 50% ejensi kukhona isisekelo, kodwa azisebenzi ke, u-25% wama-ejensi akuvezi, 25% ejensi bayadideka lo mbuzo. Ngokuvamile, inkinga esebenza base iklayenti encishisiwe noma yokuthi zingaholeli noma yokuthi azisebenzi ke. Njalo ikhasimende abathenge enkonzweni ejensi ingcebo, kufanele kube "nohlelo lwezinombolo olubizwa": sidinga igama lakhe, inombolo kamakhalekhukhwini kanye e-mail. Futhi hhayi nje ngenxa yokuthi singabona kangakanani amakhasimende ethu, futhi kusebenta ngekukhutsala nabo. Uma sikwazi ukwakha base amakhasimende ethu, sihlakulela nabo njalo yokuxhumana, izikhathi okungenani 24 ngonyaka ukuhalalisela injabulo uhambo, zokuzalwa, ukuthumela ukwaziswa okuwusizo mayelana impahla kanye, okubaluleke kakhulu, ukusuka base yethu amakhasimende amasha inkampani yethu. Thumela izincwadi kubo ngesicelo ukuncoma kuwe, sikhuthaze umsebenzi izincomo, ukusebenzisa izwi lomlomo.
Akumangazi ukuthi ngokushesha nje siqala ukukhuluma nabo, basuke ngempela kokuqala ukuthenga ngaphezulu. Ngenxa yokuthi uwakhumbule, esiyaziyo ngala madoda thina ubakhuthaze okwengeziwe ukuze beze kithi futhi bachithe imali yabo, ngoba ngokusho izibalo eRussia yonke imikhaya eshintsha emakhaya abo kanye njalo iminyaka eyisikhombisa.
njalo kanjani ukwandisa ikhasimende lakho base ngokusebenzisa izinsiza zangaphakathi inkampani?
Akubalulekile nje kuphela ukuze isebenze base iklayenti, kodwa futhi ukuze sandise kuyo zonke izindlela, ngokwesibonelo ngokuwufundisa izinto iziphakamiso. Uma sikucela amakhasimende ethu ukusinika omunye, cishe bayoba ukufeza isicelo kwethu, kodwa uma sinikeza kubo uhlobo oluthile ibhonasi ukuthi bayoba moitivrovat ukwenza isenzo, ukuphumelela kwalesi siphakamiso kuzokhulisa izikhathi eziningi.
Ithuluzi yesithathu - SERVICE
Njengoba omunye gurus e yokuthengisa, udinga idlule ikhasimende okulindelwe. Akwanele nje ukunikeza isevisi iklayenti azokuthanda, kubalulekile ukuba isevisi, ikhwalithi iklayenti Akazi nakwazi ukuthi.
Kungani //www.amazon.com/ omunye wabaholi?
Ngokwesibonelo, i-Amazon - omunye sites okuholela yokuthengisa inthanethi, lapho sibashiya isicelo ukushaya ucingo ukubuya, singabuya futhi yesibili engaphansi. ukusabela okunjalo kwasho omunye akalindele, futhi yini izinkinga ixazululwe yalokhu?
1. Asilahlekelwa ikhasimende, ngokushesha nje lapho kwadingeka isidingo ngokushesha ukuhlanekezela lubito lwayo ukwanelisa. Umdayisi uthola ukuthi ziyini izidingo iklayenti futhi kuholela sokuvalwa kuthengiselana kuze ikhasimende "tepid";
2. Iklayenti uhlala bahle mayelana isevisi kanye kuthiwani ukunakekelwa yokuxazulula inkinga yakhe (eqinisweni, thina baxazulule izinkinga zabo ngokwandisa ukuguqulwa yokuthengisa yethu esuka engicabanga ukuthi angaba yikhasimende e siguqukele real);
3. Uma ikhasimende has a umbuzo noma inkinga, bese ijubane ngikho okuqakathekileko.
Ingabe ukulungele ukuba ngokushesha?
Zibuze lo mbuzo, ebhizinisini lakho, zingaki amaminithi izingcingo emuva ukuze iklayenti ezingaba? Uma sekudlule imizuzu engaphezu kwengu-30, amathuba eqinile ukuthi iklayenti isivele baxhumane izimbangi zakho. Kuwo wonke ibhizinisi nezinkampani ngokwanele ezisebenza ingxenye yakho, futhi, njengoba umthetho, engicabanga ukuthi angaba yikhasimende uya izinkampani 3-5 ukuze baxazulule izinkinga zabo futhi, njengoba nje ulinde, unayo amaklayenti kancane.
Yini kuvame kwenteka izinkampani zethu Russian? Ukushiya isicelo, kokushaya ngesicelo ukubiza emuva, sizokwenza, kakhulu, yimenenja abanekhono ungathola ukuthi balalela futhi zithi Uyobiza futhi maduze. Esimweni okubi - ngakho singakwazi ukulindela usuku noma izinsuku ezimbili, uma inkinga yethu basayikhumbula futhi asinike impendulo ngalesi sikhathi kudingeka senze ambalwa yamakholi encintisana ukuya lapho siye sakhonza ngokuyimpumelelo.
Ukusebenzisa practice lawa mathiphu alula, maduze uthole ukubuya omuhle kuhlelo lokusebenza. Kukhona enye indlela esingathola ukwandisa yokuthengisa ingcebo ejensi - is umsebenzi umuntu ngumxhumanisi ibhizinisi emakethe ingcebo. Iyiphi indlela oyisebenzisayo, ungakhetha. Umgwaqo ngokuhamba!
1c ezishintshayo ukukhiqizwa yesimanje.
Regional inethiwekhi - kuyini? Yiziphi inethiwekhi lesifunda?
Indlela ukuthunga ingubo-umfece: Isibonelo "Gucci"
Isiteshi ethandwa kakhulu ku-YouTube: Five umhlabeleli
Engaphathekile wamathumbu syndrome: Izimpawu kanye Ukwelashwa
I-Mac Harmony ibuhlungu: ukubuka konke, incazelo, shades kanye nempendulo evela ochwepheshe
Isethulo entsha Chinese Suv Changan CS75